केकीको ‘बोक्सीको घर’ फ्लोरमा केकीको ‘बोक्सीको घर’ फ्लोरमा
केकीको ‘बोक्सीको घर’ फ्लोरमा
काठमाडौं । निर्देशक विशाल भण्डारी आउँदो वर्ष फिचर फिल्म ‘कहानी तिम्रो मेरो’ लिएर आउँदै छन् । ‘कहानी तिम्रो मेरो’ कमेडी च्याम्पियन सिजन–२ सकिएपछि सुरु हुनेछ । ‘कहानी तिम्रो मेरो’लाई विशालले निर्देशन गर्नेछन् ।
विशालकै निर्माण रहने चलचित्र ‘बोक्सीको घर’ पनि आउँदो वर्ष रिलिज हुनेछ । यसमा केकी अधिकारीको पनि लगानी रहने छ । यो चलचित्रको थिम पोस्टरमा केकी अधिकारी छिन् । ‘कहानी तिम्रो मेरो’को फस्ट लुकमा केकी अधिकारी र निराजन प्रधान छन् ।
फ्लोरमा गइसकेको ‘बोक्सीको घर’लाई सुव्रतराज आचार्य र सुलक्षण भारतीको निर्देशन रहने छ । यी दुवै चलचित्र वि.सं. २०७८ सालमा रिलिज हुनेछन् ।
‘मिरर’ मा आर्यनको जोडी उपासना
गोर्खा वारियर–२ बनाउँदै मिलान चाम्स
‘ए मेरो हजुर ४ र पारस’ बीचको विवाद के हो ?
नबनिर्बाचित अध्यक्ष चालिसे महासघंको आमन्त्रीत सदस्यमा मनोनित
मिस्कल हानेर सताउछे ( गजल)
फाल्गुन १६ सम्म निर्बाचनको सम्पूर्ण कार्यक्रम रोक्न तुलसीपुर खानेपानीलाई उच्च अदालतको आदेश
ऐतिहासिक भोटेमेला-२०७७ प्रचारप्रसार सम्बन्धमा छलफल
आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धनका लागि ऐतिहासिक भोटे मेला